Midowga Musharixiinta oo soo saaray digniin la xiriirta heshiiskii lagu gaaray Baydhabo - Awdinle Online
Midowga Musharixiinta oo soo saaray digniin la xiriirta heshiiskii lagu gaaray Baydhabo
Madaxweynihii hore ee Galmudug kana mid ah Xubnaha Midowga Musharixiinta Madaxweynaha Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa ka hadlay heshiiskii guddiyada ka kala socda dowladda, dowlad goboleedyada iyo Gobolka Banaadir ay ku gaareen baydhabo, kaas oo la xiriira Arrimaha doorashooyinka Soomaaliya.
Guuleed oo u hadlayay Midowga Musharixiinta ayaa waxaa uu marka hore sheegay in maalmihii la soo dhaafay dalka uu kusoo kordhay faafintaanka Cudurka Safmareenka ah ee Coronavirus,isla markaana dowladda looga baahan yahay in aysan siyaasadeed oo marmarsiiyo uga dhigan in dib loo dhigo doorashooyinka dalka.
Waxaa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in xilligan ay aheyd in howlaha doorashooyinka ay socdaan ama uu jiro heshiis laga gaaray, balse ay nasiib darro tahay in uusan jirin heshiis doorasho oo la iska ogol yahay, weline Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u si sharci darro ah ku joogo Villa Soomaaliya.
Dhinaca kale Cabdikariin Xuseen Guuleed waxaa uu ka hadlay heshiiskii ay Baydhabo ku gaareen Guddiyada ka kala socda dowladda, dowlad goboleedyada iyo Gobolka Banaadir, waxaana uu sheegay in hadii sida ay maqleen uu yahay ay soo dhaweeynayaan heshiiska Midowga Musharixiinta.
Waxaa uu sheegay in ay jireen heshiisyo dhowr ah oo la xiriira doorashooyinka dalka oo horay loo gaaray sida heshiiskii 17-kii September, waxaana uu ka digay in an la dhaqan gelin heshiiska is-afgarad ah oo ay Guddiyada ku gaareen Baydhabo.
Ugu dambeyn waxaa uu sheegay Cabdikariin Xuseen Guuleed in heshiiska Baydhabo lagu gaaray uu keenay dibadbaxa ay Midowga musharixiinta ku dhawaaqeen Maalinta Jimcaha ah ee tododbaadkaan, waxana uu Madaxda dowladda & dowlad Goboleedyada inay dhaqan geliyaan heshiiskaas.
Previous articleGuddoomiyaha Aqalka sare oo hal arrin ka dalbaday dowladda & Dowlad Goboleedyada
Next articleJaneraal Xuud oo Ciidamo soo bandhigay kadib farriintii uu u diray Madaxda Hir-Shabeelle